ရထားလမ်းမော်ကွန်း - စာမျက်နှာ 1585 / 1590 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
high-speed ရထားသတ်မှတ်မည် Properties ကို။
က CAF စပိန်နိုင်ငံတွင်ကားများ built ကုမ္ပဏီထံမှရရှိသောမြန်နှုန်းရထားအစုံ,6ပါဝင်ပါသည်။ ဒီအစုတွင်, လုံခြုံတဲ့ဖုန်းကိုလိုင်းအတွက်ခရီးသွားလာနေစဉ်ခရီးသည်များအတွက်အများဆုံးနှစ်သိမ့်အမြင့်ဆုံးနည်းပညာပေးအပ်သည်။ လေအေးပေးစက်အတွက်အစာရှောင်သွားပါလိမ့်မယ်အရာ 250 ကီလိုမီတာမြန်နှုန်းရထား, ဗီဒီယို, [ပို ... ]
လမ်းပို့ဆောင်ရေး၏ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးသည်နှင့်အညီပို့ဆောင်ရေးရထားလမ်းတစ်ဦးထက်ပိုသောယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းများဖြစ်ရန်အတွက်အချိန်သုံးစွဲဖို့အထိရောက်ဆုံးလိုအပ်ချက်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လျော့ချနှင့်အခြား Modes သာ, ထိုအဆင့်မြင့်ကမ္ဘာကြီးနှင့်ဥရောပနိုင်ငံများတွင်အချို့ရထားလမ်းပေါ်တွင် [ပို ... ]
Crossing ပွင့်လင်း Air ကိုပြတိုက်ခံစားရပါလိမ့်မယ်
Erzincan အတွက် stream Sense သည်နှစ်ဆလမ်းအလုပ်မြန်နှုန်းမလြော့နေဆဲဖြစ်သည်။ Erzurum-Erzincan အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း 1997 Sense သည် Creek အဘိဓါန်လမ်းကွာဟလာနေတဲ့အကျင့်ကိုကျင့် 2011 နှစ်ပေါင်းအကုန်ပြီးစီးလိမ့်မည်နှစ်တွင်စတင်ခဲ့တယ်။ 50 ကီလိုမီတာလမ်းကြောင်းအတွက်လေ့လာမှုအများစုပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည်။ မြေဆီလွှာ၏တန်ချိန်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ [ပို ... ]
Konya` Aladdin-ကျောင်းဝင်းလမ်းရထားလိုင်းကိုအတွက် Cruise ၏ကျိုးဝါယာကြိုးများ၏ပုံစံအတွက်လိုင်းခရီးသည်ကြောက်ရှိရာ။ အဆိုပါရထားစနစ်များဦးစီးဌာနအဆိုအရ Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, အောင်ပွဲအကြားလမ်းရထားလိုင်းကို၏စွမ်းအင်ကိုဝါယာကြိုးများရပ်တန့်-Aladdin အတိအကျမသိရသေးအကြောင်းပြချက်ရိုက်ယူခဲ့သည်, သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Marmaray စီမံကိန်းတိုးတက်မှုကဗီဒီယိုအောက်တိုဘာလ 2010
အမြစ် 2004 နှင့်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ထားကြ၏ Marmaray, က Bosphorus ၏ဥရောပနှင့်အာရှနှစ်ဖက်အောက်မှာစည်းလုံးညီညွတ်မည်ဟုခရီးသည်ရထားလမ်းတိုးတက်မှုစီမံကိန်းကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်သည်။ Marmaray အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြား, Eurotunnel နဲ့တူနေတဲ့ရထားလမ်းစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ Halkalı Gebze [ပို ... ]
26 / 10 / 2010 Levent Ozen 0
Samsun’da bulunan 806 kilometre yol ağının 275 kilometresi bölünmüş yol haline geldi. Kara yolları yatırımları hakkında bilgi veren Karayolları 7. Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da 806 kilometre yol uzunluğunun bulunduğunu, bu yolun 383 kilometresinin devlet [ပို ... ]
25 / 10 / 2010 Levent Ozen 0
Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, 45 သည်သူ၏Görükleကျောင်းပရဝုဏ်အတွင်းယာဉ်ကြောယို၏အတွင်းနှင့်ထွက်နိုင်ငံသားများသူ၏ပညာရေးနှင့်နေ့တိုင်းရာပေါင်းများစွာအကြောင်းကိုတထောင်ကျောင်းသားများ, ဆေးပညာဌာနနောက်ကျောကိုဖန်ဆင်းသောလမ်းကြောင်းများအတွက်အစားထိုးဖြေရှင်းနည်းများ demystifies ။ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက် Uludag တက္ကသိုလ် [ပို ... ]
24 / 10 / 2010 Levent Ozen 0
Adiyaman-Gölbaşıကြောင့်Burunçayırရေလိုင်းများကိုခှဲဝေသောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလမ်းဖောက်ပေးလိုက်တာမှရွာ၌ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်နှင့်ရွာသားများဖြစ်သောကြောင့်မြေမှုန့်၏သားကောင်များဖြစ်ဟုဆိုသည်ခဲ့ကြသည်။ BurunçayırကျေးရွာအကြီးအကဲCumalıနည်းပြကြောင့်မဆံ့ရွာဖြတ်သန်းလမ်းမပေါ်တွင်အလုပ်၏သားကောင် [ပို ... ]
17 / 10 / 2010 Levent Ozen 0
İzmir-İstanbul arasını 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun, Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’in ekonomik ve sosyal hayatında büyük değişimler yaratacağı bildirildi. Başta inşaat olmak üzere birçok sektörün canlanacağı, nakliye masraflarının düşeceği, İzmirli işadamlarının daha sık İstanbul [ပို ... ]
15 / 10 / 2010 Levent Ozen 0
ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်အလေ့အကျင့်အတွက်သက်သေပြအဖြစ်တူရကီကမဟာဗျူဟာမြောက်အနေအထားကိုအတွက်ကြောင်း, မရှိတော့ဟူသောစကားလုံးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်အနေအထားကိုဖြစ်ပါသည်, ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူတိုင်းပြည်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၏အရေးပါမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသ "ဟုပြောသည်။ ငါတို့သည်ဤနည်းဗျူဟာများကလိုအပ်သောအခြေခံအဆောက်အဦအလုပ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ "ဟုသူကဆိုသည်။ [ပို ... ]
နည်းလမ်းများနှင့် Derindere လိုင်းလုပ်ငန်းခွင် Continues
13 / 10 / 2010 Levent Ozen 0
Gesi yolu Derindere mevkisinde yapımı devam eden yol çalışmasını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bu yolun tamamlanması ile daha güvenli, seri ve kısa bir ulaşım sağlanmış olacaktır” dedi. Melikgazi Kaymakamı Nusret Dirim ile [ပို ... ]
10 / 10 / 2010 Levent Ozen 0
TCDD ကားဆွဲမော်တော်ယာဉ်နံပါတ် System ကိုရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်း Tank (ကိုယ်ပိုင် Tenderline က) စက်ခေါင်းစက်ခေါင်းçtnnအရေအတွက်ကဂဏန်းလေးလုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးဂဏန်း, axles ၏ c ဘီး drive ကိုနံပါတ်တစ်ခု, ဒုတိယဂဏန်း, T, စုစုပေါင်း (+ လမ်းညွှန်များ drive ကိုဘီး) ဝင်ရိုးလုပ်တဲ့စက်ခေါင်းအရေအတွက်သည် nn ဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
အဝေးပြေးလမ်းမကြီး7။ လက်ထောက်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Hasan ဗိုလ်ကြီး "အဝေးပြေးကြည်းတပ် 26 စီမံကိန်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့စုစုပေါင်းစီမံကိန်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ် 948 သန်း 344 696 တထောင်ပေါင်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။ ကြည်းတပ်အဝေးပြေးအဝေးပြေး7ပြုအလုပ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေး။ [ပို ... ]
09 / 10 / 2010 Levent Ozen 0
တောင်ပေါ်က Zigana မှပင်လယ်နက်ဆက်သွယ် Gumushane စက်မှုလုပ်ငန်း '' နှင့်စီးပွားရေးသမားများရဲ့အသင်းမှကျမ်းပိုဒ်၏တဦးတည်းဖြစ်သော (GÜSİAD) Gumushane ဌာနခွဲကသမ္မတ Murat Akcay, အရှေ့ Anatolia အသစ်တစ်ခုလမ်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုချက်ချင်းအုပ်စုခွဲကဆိုသည်။ မိမိအစာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်, မြို့ကြီးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် [ပို ... ]
Edremit ပင်လယ်ကွေ့ချိတ်ဆက်ပိတ်ထား Balya- Havran နှင့် Edremit ရထားလမ်းအတွက် 1939 နှစ်ပေါင်းသဘောပေါက်ထပ်မှတပါး Havran မြို့တော်ဝန် Hasan Lofcalıoğl ... .. Havran မြို့တော်ဝန် Hasan Lofcalıoğl 1939 Balya- Havran နှင့် Edremit ရထားပိတ်ပါသည် [ပို ... ]
'' ဖြေလျှော့မှုကြောင့် 2023 ပစ်မှတ် ''
06 / 10 / 2010 Levent Ozen 0
10 ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျင်းပခဲ့တယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖိုရမ်, ရထားလမ်းပစ်မှတ်အဆုံးအဖြတ်များ၏ဒါ xnumx'y ဖယ်ရှားရေး၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရှယ်ယာဖြစ်ပါတယ် Ibrahim Özerဒီရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာလွတ်လပ်များ၏လိုအပ်ချက်, ထိုအလေးပေးဟုပြောသည် "လွတ်လပ်၏ဥပဒေရေးရာစည်းမျဉ်းနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲလုပ်သင့်ပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင် [ပို ... ]
နှစ်ချက်လမ်းမကြီးအထိတိုးချဲ့သည့် Gediz ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုန်ဖြစ်ပါသည်
29 / 09 / 2010 Levent Ozen 0
ခဏတစ် (GOSB) အောက်ဆုံးမှတိုးချဲ့ခံရဖို့အစီရင်ခံခဲ့သည်များအတွက်Kütahya၏ Gediz ခရိုင်များတွင်နှစ်ဆလမ်းဆောက်လုပ်ရေး၏ Gediz ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းကြောင်းဆုံး gediz ထံမှ gediz-Eskigediz Kütahyaအဝေးပြေးလမ်းမကြီးလမ်းဦးတည်ချက်သို့ဆက်လက်ထားတဲ့ထဲသို့စုံတွဲများအကြား bends [ပို ... ]
Isparta Beysehir နှစ်ချက်လက်ဝါးကပ်တိုင်လမ်းများခဲ
Konya, ယာဉ်မောင်းနှင့်ယာဉ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကသမ္မတ Faruk Aydin ၏Beyşehirခရိုင်, လမ်း Beysehir-Isparta အကြားကို double-လမ်းအမှုကိုပြုလျှင်, လျော့နည်းသွားအသွားအလာမတော်တဆမှု၏ခရီးသွားပိုလုံခြုံပြဌာန်းချက်ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ Beyşehirယာဉ်မောင်းများနှင့်ယာဉ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကသမ္မတ Faruk Aydin, Konya-Isparta [ပို ... ]
Malatya, Elazig ကတ္တရာသုံးကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးသူများဖြစ်ကြလိမ့်မည်
25 / 09 / 2010 Levent Ozen 0
အဝေးပြေးလမ်းမကြီး 8 ။ အဆိုပါ 2011 ခုနှစ်တွင် Malatya-Elazığအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုကတ္တရာကွန်ကရစ်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းခံရဖို့အစီရင်ခံခဲ့သည်။ AK ပါတီ Malatya လက်ထောက် Fuat Ölmeztoprak, အ Stepanakert output ကို 20 ကီလိုမီတာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်ကြောင်း Elazig-Malatya လမ်းနှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဤကဏ္ဍကိုတစ်ဦးပိုင်းခွဲအဝေးပြေးလမ်းမကြီးအဖြစ် [ပို ... ]
အဓိကအားဖြင့်ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Tekirdag များတွင်အသုံးပြုခံရဖို့စီစဉ်ထား - Non-အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များမှတိုက်ရိုက်နီးစပ်ရထားလမ်းဖို့ရထားလမ်းဆက်သွယ်မှုတည်ရှိသောစက်မှုအဆောက်အဦ၏မျက်နှာကို TIR ကုန်တင်ကားနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် Muratli လိုင်း, ရယ်နှင့်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး recover အခြားစီမံကိန်းများမှစက်မှုလုပ်ငန်း [ပို ... ]
« 1 ... 1.584 1.585 1.586 ... 1.590 »